Waqtiga la qabanayo Muxaadarada Sheekh Kenyaawi oo lagu dhawaaqay iyo goobta – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Waqtiga la qabanayo Muxaadarada Sheekh Kenyaawi oo lagu dhawaaqay iyo goobta
By admin on January 12, 2019 No Comment
Sabti, Janaayo, 12-2019(HNN)- Muxaadaro uu Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi qorsheeyay inuu ku qabto magaalada Muqdisho balse shalay uu dib u dhac ku yimid ayaa lagu qaban doonaa garoonka Stadium Benadir ee magaalada Muqdisho.
Sheekh Kenyaawi ayaa lagu wadaa in Jimcaha soo socota oo ku beegan 18ka bisha January uu muxaadarada ku qabto garoonka kubbada cagta Koonis Stadium ee degmada Cabdicasiis magaalada Muqdisho,kadib markii loo gartay in dadka imanaya muxaadarada ay ku filnaan karto.
Isbuurasho ka dhacday gelinkii dambe ee shalay hool ku yaal hotel Sahal ee magaalada Muqdisho ayaa sababta in rasaas ay ku dhacdo gabar magaceeda lagu sheegay Malyuun oo ka mid ahayd dadkii isugu soo baxay ka qeybgalka muxaadarada.
Sheekh Kenyawi ayaa ku booqday isbitaalka lagu daweynayo gabadhan iyadoo Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ay kafaalo qaaday dhaqaalaha ku baxaya daweynta gabadhan.
Waqtiga la qabanayo Muxaadarada Sheekh Kenyaawi oo lagu dhawaaqay iyo goobta added by admin on January 12, 2019